News Collection: कहिले कपडा खोल्ने त कहिले कपडा नै नलगाउने, बाहिरका कपडा त लगाउँछन् तर भित्रका लगाउनै भुल्छन् ।
कहिले कपडा खोल्ने त कहिले कपडा नै नलगाउने, बाहिरका कपडा त लगाउँछन् तर भित्रका लगाउनै भुल्छन् ।
सेलिब्रेटीहरुले के खान्छन् ? के लगाउँछन् ? सबैको नजर हुन्छ । कलिउडका सेलिब्रेटी सडकमा आउँदा त दुई÷चार वटा क्यामरा तयार हुन्छन् भने बलिउड र हलिउडका कलाकार सडकमा आउँदा सयौं क्यामेरा सेलिब्रेटीलाई कैद गर्न तयार हुन्छन् । सेलिबे्रटीका सबै दृष्य क्यामेरामा कैद हुने भएपछि उनीहरुका राम्रा र नराम्रा पक्ष क्यामेरामा कैद हुने नै भए ।
त्यसमाथि बलिउडमा त कलाकारले नखरा पार्छन भने हलिउडकाले किन नपार्नु । हलिउडका कलाकार चर्चामा आउनका लागि कहिले कपडा खोल्ने त कहिले कपडा नै नलगाउनेसम्मका हर्कत पनि गर्छन् ।
हलिउडका सेलिब्रेटीहरु अण्डरवेयरमा मात्र देखिनु त ठूलो कुरो भएन तर कहिलेकाहीं यी कलाकारहरु बाहिरका कपडा त लगाउँछन् तर भित्रका लगाउनै भुल्छन् । त्यसमाथि बाहिरको कपडा पारदर्शी लगाएपछि सबै अङ्ग देखिने नै भए । हलिउडका केही महिला सेलिब्रेटीले आफ्नो जीवनमा यस्तै केही गल्ती गरेका छन् जसका कारण उनीहरु विना ब्रा नै क्यामेरामा कैद भएका छन् ।
यसमध्ये एलिजाबेथ हर्ले एक हुन् । लण्डनमा आयोजना गरिएको एउटा च्यारिटी अभियानमा एलिजावेथले विना ब्रा नै कार्यक्रममा आएकी थिइन् । उन्ले लगाएको पातालो साडी भित्रबाट स्तन प्रष्ट देखिएका थिए ।
ब्रिटनी स्पेयर्स पनि ती मध्यकै एक हुन् । आफ्ना प्रेमी जासन ट्राविकसँग सार्वजनिक जीवनमा प्रकट भएकी ब्रिटनीले ब्रा विना नै टिसर्ट लगाएकी थिइन् । जुन कुरा उन्को छातीमा प्रष्टसँग देखिन्थ्यो ।
नायिका मेगान फक्स आफ्ना चलचित्र रिभेन्ज अफ द फालनको प्रिमियरका क्रममा जर्मनीमा सार्वजनिक हुँदा यस्तै अवस्थामा प्रकट भएकी थिइन् । त्यहाँ उन्ले लगाएको पातलो पहिरन माथि पानी परेपछि उन्का भित्रि अङ्गहरु पुरै देखिएका थिए ।
लागूपदार्थका दुव्र्यसनमा फसेकी लिन्डसे लोहान पनि एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुँदा विना ब्रा नै भेटिएकी थिइन् । उन्ले लगाएको कालो टिसर्ट यती पारदर्शी थियो कि भित्रका अङ्गहरु पुरै देखिएका थिए ।
त्यसो त नायिका प्यारिस हिल्टनलाई पनि कालो टिसर्टमा विना ब्रा नै भेटिएको थियो । घरबाट निस्केर गाडी चढ्दै गर्दा क्यामेराले प्यारिसलाई फेला पारेका थिए । कालो ड्रेसबाट प्यारिसका स्तनका मुन्टा पुरै देखिएका थिए ।
हालै हलिउडबाट बलिउडका विग बोसमा सहभागी हुन आएकी पामेला एन्डरशनलाई त स्तन देखाउँदैमा मजा आउँछ । उन्ले विना ब्रा नै दर्जनौं पटक फोटो सुट गरेकी छन् । उन्ले आफ्ना स्तन आर्कषक बनाउन मात्रै दर्जनौं पटक स्तनको सर्जरी पनि गराइसकेकी छन् । पामेला पनि यस्तै सार्वजनिक जीवनमा विना ब्रा नै पटक पटक फेला परेकी छन् ।
पामेला मात्रै होइन्, खेलाडी डेभिड बेकह्यामकी श्रीमती तथा मोडल भिक्टोरिया बेकह्याम पनि ब्रा विना नै सडकमा फेला परेकी थिइन् । त्यसो त सराहा जेसिका पार्कर, क्यामरन डायज, जेनिफर एनिस्टनलाई पनि पटक पटक ब्रा विना नै सडकमा फेला पारिएको छ ।